Sinnaanta lab iyo dheddig ee dunida - BBC News Somali
Sinnaanta lab iyo dheddig ee dunida
Faraqa u dhexeeya ragga iyo haweenka ayaa isku soo dhawaanayay sanadkii la soo dhaafay, sida badan, mahad haka gaartee, haweenka galaya siyaasadda iyo shaqada sida laga soo xigtay Kulanka Dhaqaalaha Adduunka.
Waxaa lagu faahfaahiyay arrimaha sida dhaqaalaha, caafimaadka, tacliinta iyo ka qeybgalka siyaasadda boqol afartan iyo labo dal.
Ilaa markii warbixinta bilaabatay sagaal sano ka hor, boqol iyo shan dal ayaa faraqa jinsiga uu isku soo dhawaaday iyadoo shanna uu sii xumaaday faraqa sida uu golaha sheegay.
Iceland ayaa ku jirta hogaanka tartanka sanadka lixaad halka Yemana ay joogto hoos.
Dalalka Nordic ayaa ku jira halka ugu sareeya liiska oo ay ku jiraan Finland, Norway iyo Sweden iyadoo ay raacday Iceland shanta ugu sareysa. Waxay muddo dheer u riyaaqsanaayeen wax ay ugu yeereen qorshayaashooda siyaasadeed ee horumarka leh.
Uk waxay hoos uga dhacday sideed god darajooyinka adduunka iyadoo noqotay lix iyo labaatan halka ay Rwanda kor ugu kacday todobo god banaanka labaatanka sare, taas oo ka dhigtay darajada ugu sareysa dhaqaalaha Africa.
Isbadalka daqliga haweenka wuxuu ka dambeeyay hoos u dhaca Britain sida ay sheegtay Kulanka Dhaqaalaha Adduunka. Dhanka kale ee Atlantic, Mareykanka ayaa kor u kacay sadax god oo gaaray labaatan iyadoo faraqa mushaarka uu yaraaday, waxaana kor u kacday celceliska haweenka ku jira baarlamaanka iyo boosaska heerka wasaaradeed, sida ay sheegtay.
Qoraha warbixinta Kulanka Dhaqaalaha Adduunka Saadia Zahidi ayaa sheegtay, horumarka Rwanda inuu gaaray xaqiiqda ah inay jiraan ku dhawaad haween badan sida ragga oo shaqeeya, iyo kuwa badan oo ka shaqeeya wasaaradaha dalka taas oo aan ku imaan horumarka adeegga caafimaadka iyo waxbarashada.
Layaabka kale ee liiska waxaa ku jira Nicaragua, oo u kacday lix, boos ugu wanaagsan haweenka iyadoo ka timid numbar toban. Filibiinna, waxay gaartay darajada ugu sareeya dalalka Asia waxayna noqotay sagaal.
Dalalka waxaa lagu qiimeeyay iyadoo loo fiiraanyo afar waxyaabood.
Ma shaqeyn karaan haweenka iyo isku mushaar ma qaadan karaan shaqooyinka isku midka ah? Ma heli karaan tacliin? Ma loo ogolyahay inay adeegsadaan awoodooda siyaasadeed? Ka waran caafimaadka - ma ahan cimriga haweenka, balse saamiga haweenka iyo ragga ay bulshada ku dhex leeyihiin?
Natiijada wadartan waxaa saameyn ku leh awoodaha bulshada. India, tusaale ahaan, ayaa sadax iyo toban hoos u dhacday oo gaartay 114 sanadkan, waana tii ugu hooseeysay dalalka loogu yeero Brics.
Zahidi waxay sheegtay ka qeybgalka dumarka nolosha guud ee India ay si liiidata u saameysay su'aalo ku hareereysan oo ah, hadii ay nabad tahay in la isticmaalo gaadiidka dadweynaha.
Adduunkan, inta badan horumarka isla ekaashaha jinsiga wuxuu ka yimid haween badan oo galaya siyaasadda iyo shaqada sida ay sheegtay.
Image caption Dumarka siyaasadda ku jira
Warbixinta qoraha waxay intaas ku dareysaa "Marka ay ku biireen haween iyo rag badan xoogga shaqada tobankii sano ee la soo dhaafay ayey 49 dal, haween ka badan ragga ay galeen shaqada.
"Iyo arrinta siyaasadda, adduun ahaan, waxaa hadda jira lix iyo labaatan boqolkiiba haween badan oo xildhibaano ah iyo konton boqolkiiba haween badan oo wasiiro ah taaso oo ka badan toban sano ka hor. Kuwaasi ayaa ah isbadalo weyn ee dhaqaalaha iyo dhaqamada dalalka."
Zahidi waxay sheegtay in dalalka ay badi gaaraan heer sareeya sababo qoondeysan ama higsi ay ka dhigteen, tusaale ahaan, soo rogidda qoondeynta heerka lagu xulanayo doorashada musharaxnimada.